Raki-pahalalana - Wikipedia
Ny raki-pahalalana (izay manana tsipelina maro) dia boky firaketana ny fampahalalana mikasika ny fahaizan'ny olombelona. Ny raki-pahalalana ankehitriny dia na vita taratasy (toy ny Rakibolana Rakipahalalana) na eo amin'ny Aterineto (toy ny Wikipedia) izay mirakitra lahatsoratra maro amin'ny taranja iray ho an'ireo raki-pahalalana manokana, na amin'ny taranja rehetra ho an'ireo raki-pahalanana tsotra.
Naturalis Historia, raki-pahalalana voalohany (fanontana ny taona 1669 io natolotra io)
Roa arivo taona izay no nisian'ny rakipahalalana voalohany; ny rakipahalalana voalohany, Tantara Voajanahary ("Histoire Naturelle" amin'ny teny frantsay), dia nosoratan'i Pliniosy Be Taona tamin'ny taona 77 tany ho any. Ny raki-pahalalana araka ny amantaratsika azy amin'izao fotoana izao, dia nipoitra tamin'ny taonjato faha-17. Tafiditra anaty boky iray ny raki-pahalalana, kanefa ny raki-pahalalana sasany, toa ny Encyclopaedia Britannica amin'ny fiteny anglisy, na ny Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana amin'ny fiteny espaniola, dia raki-pahalalana misy "volume" amam-polony (32 ho an'ilay voalohany, 70 ho an'ilay faharoa). Ankehitriny, misy raki-pahalalana elektrônika (an-tranonkala na amin'ny CD), toy ny Wikipedia (manana sampanana amin'ny fiteny mahery ny 250), na Citizendium.
2.1 Pliniosy Be Taona
2.2 Arabo sy Persana
2.3 Isidoro de Sevilla
2.5 Taonjato faha-17
2.6 Taonjato faha-19
2.7 Taonjato faha-20 sy faha-21
2.8 Raki-pahalalana malalaka
3.2 Raki-pahalalana an-tranonkala
Amin'ny teny malagasy, maro ireo fomba fanoratana ny teny raki-pahalalana: azo soratana hoe rakipahalalana (tsy misy tsipi-panohizana na maritsoratra) na raki-pahalalàna (misy tsipi-panohizana ary maritsoratra). Ekena fa misy avokoa ireo fanoratana antenantenan'ny tranga voalaza teo aloha (izay misy tsipi-panohizana na/sy maritsoratra).
Pliniosy Be TaonaHanova
Ny asa fanaovana fahalalana voalohany izay fantatra amin'izao fotoana izao, dia ny Naturalis Historia izay nosoratan'i Pliniosy Be Taona, olom-pirenena romana niaina tamin'ny taonjato volalohany tal. J.K. Nanatambatra asa soratra misy toko fito amin'ny telopolo izay mikasika ny tantara natoraly, ny zavakanto, ny maritrano, ny haitsabo (médecine), ny jeôgrafia, ny jeolojia ary ny fiendriky ny tontolo manodidina azy izy. Ao amin'ny sasintenin'ny bokiny izy nanatambatra fisehoan-javatra roa alina, avy amin'ny asa soratry ny mpanoratra hafa miisa maherin'ny roanjato, mbola nampiany fisehon-javatra hafa araka ny traikefany. Nivoaka tamin'ny taona 77 na 79 tal. J.K. teo ilay asa soratra, na dia tsy tapitra ny namarana ny asa fanaporofoana alohan'ny fahafatesany izy noho izy maty tamin'ny fipoahan'ny afotroa Vesovio tamin'ny taona 79 tal. J.K.
Arabo sy PersanaHanova
Ny firaketam-pahaizana miozolmana voalohany tamin'ny Andro Antenantenany dia ahitana asa mampahazo, ary fanitarana ny antsoina ankehitriny hoe fomba siantifika, fomba ara-tantara, ary fitanisana. Teo amin'ny 960 teo ho eo, ny Mpiralahy fo madio, fikambanana filôzôfy miafina any Basora, dia lasa nanoratra ny raki-pahalalan'ny Mpiralahy fo Madio. Anisan'ny asa malaza ny raki-pahalalan'ny siansa nosoratan'i Aby Bakr Al-Razi, ny Al-kindi an'i Motazily, ary ny firaketana momba ny haitsabo nosoratan'i Ibn Sina, izy nofotorana nandritra ny taonjato maro.
Isidoro de SevillaHanova
Etymologiæ, raki-pahalalana nosoratan'i Isidoro de Sevila tamin'ny taonjato fahafito
I Isidoro de Sevilla (560-636), eveka niaina tamin'ny taonjato fahafito tao Hispalis (Sevila) no mpanoratra ny raki-pahalalana voalohan'ny Andro Antenantenany. Ny raki-pahalalana nosoratany tamin'ny taona 630, izay mitondra ny anarana ahoe Etymologiæ, dia fitambaram-boky roapolo, izay ahitana fanadihadiana momba ny fiforonan'ny teny anaty toko 448. Io boky io dia tiany hitahirizina sy hampitana ny fahaizana tamin'ny Andro Antenantenany sy ny kolontsaina klasika izay andalam-pahaverezana. Nalaza be ilay bokiny ary naverina natonta impolo io bokiny io teo anelanelan'ny taona 1470 sy 1530, izay mari-palazany hatramin'ny Andron'ny Fanavaozana (frantsay: Renaissance). Somary mahafanina ihany ny fomba famaritany ny fiforonan-teny: hazavainy amin'ny alalan'ny teny mifanakaiky ara-peo aminy ny teny iray (Rex a recte agento, "mpanjaka no antsoina ilay mahitsy fanao"). Ny tanjon'ireo etimolojia (izay nihomezan'ny manam-pahaizana tamin'ny Renaissance) ireo hono dia mikendry ny fanamorana ny fahazona ny famaritana ao an-tsain'ny mpamaky. Nandray anjara tamin'ny fiharetan'ny asa soratry ny Andro Antenantenany tamin'ny alalan'ny fitanisany azy.
Nanomboka tamin'ny Boky Lehibe Efatry ny Song (宋四大書; pinyin: Sòng sì dà shū) izay natambatra tamin'ny taonjato faharaika ambin'ny folo ny tantaran'ny raki-pahalalana tany Sina. Ilay raki-pahalalan'ny Song, dia asasoratra lehibe ho an'izany fotoana izany. Ny raki-pahalalana tafarany, ny Sokatra Voalohan'ny Birao Fanangonana, dia ahitana sinôgrama 9,4 tapitrisa anaty boky miisa arivo. Maro ny raki-pahalalana nandritra ny tantaran'i Sina, miaraka amin'ny raki-pahalalan'i Shen Kuo (1031-1095) amin'ny Mengxipitan nosoratana tamin'ny taona 1088. Misy koa ny raki-pahalalana nosoratan'ny mpamorona sady agrônôma Wang Zhen (niasa nandritry ny taona 1290 hatramin'ny taona 1333) izay nanoratra ny boky Nong Shu tamin'ny taona 1313; sy ny Tiangong Kaiwu nosoratan'i Song Yingxing (1587-1666), izay nomen'i Joseph Needham solon'anarana hoe "Diderot an'i Sina".
Ny mpanjakabe sinoa Yongle ao amin'ny dinastia Ming, dia nanafehy ny tontan'ny Raki-pahalalan'i Yongle, anisan'ny raki-pahalalana lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'i Sina, izay tapitra tamin'ny taona 1408; anitana sinôgrama miisa 370 tapitrisa anaty boky miisa arivo sy iray alina nosoratin-tanana; ny efajato amin'ireo boky ireo sisa no eo am-pelantanana amin'izao fotoana izao.
Araka ny gazety anglisy iray nivoaka tamin'ny taona 1809, dia azo antsoina hoe "taonjaton'ny raki-pahalalana" ny taonjato faha-19. Te hanana raki-pahalalana amin'ny tenim-pireneny daholo ny firenena maro, ary tsy resaka firehareham-pirenena fotsiny izy io fa tombontsoa ho an'ny firenena ihany, satria ny fampielezana ny fahalalana amin'ny vahoaka dia ilaina amin'ny fivoarana ara-toekarena sy ara-pahaizan'ny firenena iray. Izany hetsika fampielezana izany koa dia tohanan'ny fihabetsahan'ny olona mahay mamaky teny sy ny fivoaran'ny fanontana pirinty izay mampidina ny vidin'ny boky sady mampidi-bola ho an'ny mpanonta pirinty.
Tany Alemaina, ny raki-pahalalana nalaza indrindra dia ny Brockhaus Enzyklopädie izay natonta tamin'ny taona 1808, ary, noho ny fahombiazany, dia naverina natonta hatramin'ny taona 2005. Ny Allgemeine Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste nosoratan'i Ersch sy Gruber izay tsy vita (boky miisa 167 izay nivoaka teo anelanelan'ny taona 1818 sy 1879).
Navoakan'i Wei Song tamin'ny taona 1834 ny Yishi Jishi (壹是紀始) izay voazara toko 22 manana lohahevitra 2 000; naverina natonta tamin'ny taona 1888 sy 1891 ilay raki-pahalalana.
Taonjato faha-20 sy faha-21Hanova
Nanomboka nivoaka tamin'ny taona 1920 ny raki-pahalalana ho an'ny daholobe sady mora vidy.
Tao Etazonia, nahitana ny fipoiran'ny raki-pahalalana ho an'ny daholobe ny taona 1950-1960. Ny malaza indrindra amin'izy ireo dia ny World Book sy ny Funk and Wagnalls.
Tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-20 no nipoiran'ireo raki-pahalalana amin'ny CD-ROM izay azo vakiana amin'ny alalan'ny solosaina: ny Encarta an'i Microsoft nalefa tamin'ny taona 1993, dia ohatra iray amin'ny raki-pahalalana tsy misy boky voaprinty sahala aminy sady tsy natonta taratasy. Noho ny fahombiazan'ny raki-pahalalana hafa eo amin'ny tsenan'ny raki-pahalalana tsy voatonta taratasy dia najanon'ny Microsoft ny raki-pahalalana Encarta tamin'ny taona 2009.
Mampiasa olona mpanoratra lahatsoratra ny raki-pahalalana tsotra, izany hoe olona nianatra sy manam-pahaizana, mananana zon'ny mpamorona izay mamehy ny fiparitahany sy ny asa mety mifototra aminy.
Avy amina asa nataon'ny nialoha azy ny ao amin'ny raki-pahalalana tamin'ny taonjato faha-19, ka noho izany maro ireo raki-pahalalana izay ahitana tsy fanajana ny zon'ny mpamorona.
Tamin'ny taona 2007, ny fanontana tamin'ny taona 1911 ny Encyclopaedia Britannica, raki-pahalalana voatonta taratasy, izay tsy mihatra amin'ny votoatiny intsony, dia anisan'ny raki-pahalalana malalaka voatonta taratasy manana votoatiny malalaka amin'ny teny anglisy.
I Wikipedia no raki-pahalalana voalohany manana votoatiny foronin'ny mpampiasa azy
Nivoaka tamin'ny Interpedia natao teo amin'ny Usenet tamin'ny taona 1993 ny raki-pahalalana dijitaly malalaka voalohany, izay azo alaina ary sintomina (anglisy: download) eo amin'ny vohikala Usenet. Mahazo mandefa votoatiny avokoa ny olona tsirairay tsy an-kanavzka. Tetikasa hafa sahala amin'izany ny Everything2 sy ny Open Site. Tamin'ny taona 1999 dia nikasa hamoaka ny GNUPedia, raki-pahalalana azo vangiana eo amin'ny Tranonkala, i Richard Stallman.
Tsy nisy raki-pahalalana naharitra sy matanjaka teo amin'ny Aterineto talohan'ny Nupedia sy ny Wikipedia. Lasa raki-pahalalana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ny Wikipedia tamin'ny taona 2004, tamin'ny lahatsoratra faha telo hetsy ny tetikasa.. Tamin'ny faran'ny taona 2005, roa tapitrisa no isan'ny lahatsoratra voaforona sy voasoratra eo amin'ny Wikipedia, amin'ny fiteny maherin'ny valopolo. Tamin'ny 2009, folo tapitrisa ny lahatsoratra tao amin'ny Wikipedia; telo tapitrisa amin'ny fiteny anglisy, fito tapitrisa tamin'ny fiteny miisa 250 hafa. Nanomboka tamin'ny taona 2003 dia nipoitra ny raki-pahalalana malalaka toy ny Baidu Baike sy ny Hudong amin'ny fiteny sinoa, na ny raki-pahalalana Citizendiym sy ny Knol amin'ny fiteny anglisy.
Ny raki-pahalanana lehibe indrindra amin'ny fiteny malagasy dia ny Wikipedia amin'ny teny malagasy, izay manana lahatsoratra maherin'ny valo alina (2018), ny faharoa, dia ny Rakibolana Rakipahalalana natontan'ny Akademia Malagasy.
Ny raki-pahalalana ankehitriny dia raki-bolana manana famaritan-teny nitarina sahala amin'ireo raki-pahalalana nipoitra tamin'ny taonjato faha-18.
Ny raki-pahalanana an-tranonkala malaza indrindra dia ny Wikipedia, tranonkala fahafito be mpamangy indrindra izay manana sampanana amin'ny fiteny maherin'ny 250. Ny mahasamihafa an'i Wikipedia amin'ny raki-pahalalana hafa dia izy manana votoatiny azo ovaovaina am-pahalalahana.
Ankoatra ny Wikipedia, ireo raki-pahalalana an-tranonkala dia ny Encarta, raki-pahalanana andoavam-bola izay nikatona tamin'ny taona 2009 noho ny fahombiazan'ny Wikipedia.
↑ Ikhwan al-Safa
↑ Needham, Volume 5, Toko 7, 102.
↑ ((en)) Richard Yeo, Encyclopaedic Visions, Cambridge (U.K.), Cambridge University Press, 2001
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Raki-pahalalana&oldid=975691"
Dernière modification le 16 Oktobra 2019, à 07:01
Voaova farany tamin'ny 16 Oktobra 2019 amin'ny 07:01 ity pejy ity.